Nalaza haingana dia haingana ny lahatsarim-pampiroboroboana Leica ahitana ny fandripahana kianja Tiananmen tao amin’ny media sosialy shinoa, ary nanjavona avy eo · Global Voices teny Malagasy
Nalaza haingana dia haingana ny lahatsarim-pampiroboroboana Leica ahitana ny fandripahana kianja Tiananmen tao amin'ny media sosialy shinoa, ary nanjavona avy eo
Ny famonoana tao no lohahevitra antserasera voasivana indrindra ao Shina.
Voadika ny 04 Mey 2019 5:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Italiano, Shqip, Español, македонски, Français, English
Ilay lehilahin'ny fiara mifono vy (Tank Man) tamin'ny 4 jona taratra ao amin'ny fitaratry ny fakantsary. Pikantsary avy ao amin'ny Youtube, Leica: – the Hunt
Niteraka tabataba tao amin'ny aterineto shinoa, ary niteraka fandraràna tamin'ilay lahatsary sy izay miaraka aminy rehetra ny lahatsary iray vaovao mampiroborobo ny orinasam-pakantsary alemà Leica.
Novokarin'ny sampan'ny Leica misahana ny dokabarotra, F/Nazca Saatchi & Saatchi, nivoaka tao Brezila tamin'ny 16 avrily ho fankalazana ny fahazato taonan'ny marika ilay lahatsary maharitra dimy minitra.
Asongadin'ilay lahatsary mitondra ny lohateny hoe “The Hunt” (ny haza) ireo tambatabatra sary mandrakitra ireo herisetra sy fahasarotana tany amin'ny faritra maro teto amin'izao tontolo izao. Niafara tao amin'ny hotely fandraisam-bahiny iray tao Beijing tamin'ny taona 1989 izay, izay nahitana mpaka sary iray nifanintontsitonan'ny manamboninahitra miaramila shinoa vitsivitsy ary avy eo navelany irery. Misy feom-basy heno ao ambadika ao raha nizotra ho eny am-baravarankely ilay mpaka sary, ary nanakatra ny fakantsariny. taratra ao amin'ny maso fitaratra, hitantsika ao ny sary malaza dia malaza ahitana ireo fiara mifono vy an'ny miaramila manavatsava ny kianja Tiananmen manatona mpanao fihetsiketsehana tokana mijoro eo anoloan-dry zareo.
Hahafantatra avy hatrany an'ilay sarin'ny “Tank Man” nopihan'i Jeff Widener tao amin'ny kianja Tiananmen tamin'ny 4 jona 1989 izay olona efa zatra an'izany tantara izany. Tamin'io andro io, nanao famoretana henjana tamin'ny fihetsiketseham-panoherana notarihan'ny mpianatra miantso ny isian'ny fanavaozana demaokratika ny miaramila shinoa. Tamin'izany fotoana izany, notombanan'ny Vokovoko Mena shinoa ho 2700 ny sivily maty novonoina tamin'izany, saingy ny fanadihadiana vao haingana kokoa avy amin'ny sampan-draharahan'ny governemantan'i Etazonia sy ny Fanjakana Mitambatra (UK) no manombana fa mihoatra ny 10.000 izany.
Efa nasehon'ny mpikaroka tao amin'ny Oniversiten'i Hong Kong fa nyfandripahana tao amin'ny kianjan'i Tiananmen, izay matetika tondroina fotsiny hoe “4 Jona”, no lohahevitra iharan'ny fanivanana indrindra ao amin'ny aterineto shinoa.
Niantsambotra tamin'ny fahitana ilay lahatsary, nilaza ny mpisera media sosialy sasantsasany fa “nanompa an'i Shina” izany, raha misalasala amin'ny fiaraha-miombona antoka misy eo amin'ny Leica sy ny Huawei, mpanamboatra finday lehibe indrindra ao Shina sady mpandrafitra ny tambajotra 5G ny hafa. Nanamaro ny maso fitaratra Leica amin'ny sasantsasany amin'ny findainy manko ny Huawei.
Na dia tsy ny Shinoa aza no tena nokendrena tamin'ny lahatsary, dia nifindra tao amin'ny media sosialy shinoa ary nalaza haingana dia haingana nandritra ny alin.
Haingana dia haingana ny valiny avy amin'ny Shinoa mpanao sivana ary namoaka izao torolalana manaraka izao, izay tafaporitsaka tamin'ny 18 avrily (via China Digital Times):
As quickly as possible, all video websites find and delete video and images from the Leica advertisement. (April 18, 2019)
Haingana araka izay azo natao, ny tranonkalan-dahatsary rehetra sy izay lahatsary rehetra hita tao amin'ny dokambarotra Leica (18 avrily 2019)
Andro vitsivitsy taorian'izany, voarara ho an'ny mpisera ny manoratra voambolana “Leica” amin'ny teny anglisy sy “徕卡” amin'ny teny shinoa ao amin'ny Weibo.
Navoakan'ny mpisera Twitter @woilgoo ny pikantsarin'ny filazana fanivanana raisin'ny mpisera rehefa miezaka ny mamoaka ireo voambolana ireo ao amin'ny Weibo. Tononin'ny naoty ny “fanitsakitsahana ny lalàna sy fitsipika manandanja ao amin'ny dinam-piarahamonina Weibo”.
#leica #莱卡 关键词被微博weibo封杀屏蔽。 pic.twitter.com/B7yRUdG9jN
— SYECOR (@woilgoo) April 18, 2019
Na izany aza, mbola mipoitra ao amin'ny Weibo hatrany ny resadresaka momba ilay lahatsary. Nandrakitra ny sasany tamin'ny resadresaka tao amin'ny Twitter, izay voabahana ao Shina, fa mbola tafiditra ao ihany amin'ny alalan'ny VPN ireo mpiseran'ny tanibe mavitrika ao amin'ny sehatra shinoa sy Twitter.
Nopihan'ny mpisera Twitter @cheriechancy sary ny randram-panehoan-kevitra iray tao amin'ny kaonty ofisialin'ny Leica tao amin'ny Weibo:
Although #TheHunt video cannot be found on #Leica’s Weibo account, Chinese social media users still managed to comment on an earlier post, subtly referring to the controversial ad and expressing appreciation and surprise that the account is still up and running #徕卡 pic.twitter.com/El2nE6nPmt
— Cherie Chan 陳卓妍 (@cheriechancy) April 19, 2019
Na dia tsy mety hita tao amin'ny kaonty Weibo an'i Leica aza ilay lahatsary ‘Ny Haza’, mbola miezaka ny manome hevitra tamin'ilay lahatsoratra teo aloha ihany ireo Shinoa mpisera media sosialy, milaza ankolaka ilay doka nampiady hevitra ary mampiseho fankasitrahana sy fahagagana fa mbola mijoro sy mandefa #徕卡 ihany ilay kaonty
Rehefa avy niditra antsehatra ny milina fanivanana, dia nangatsiaka haingana ny toe-draharaha ary voaaisotra tamin'ny sehatra media sosialy shinoa lehibe ny dian'ilay lahatsary.
Amin'izao fotoana izao ny mpisera media sosialy afa-mamoaka lahatsoratra momba an'i Leica rah ambola tsy mifandraika amin'ny votoaty hafa saropady ny voambolana.
Mbola mandeha ihany ilay lahatsary ivelan'i Shina. Ao amin'ny Facebook ireo Shinoa ampitandranomasina maro no mizara ny lahatsary ho fahatsiarovana ny faha-30 taona ny fandripahana tamin'ny 4 jona. Tena miabo tanteraka ny ankamaroan'ny domberina tao amin'ny YouTube:
Good job Leica. Salute to all the brave journalists in the world!
You earned my respect Leica, dare to tell the truth…but may god bless your business at mainland China…
a great video, why people of china dislike it who knows… Maybe they cant face the truth of about there [sic] government …
Mety tsara ry Leica. Misapaoritra amin'ireo mpanao gazety sahy rehetra eto amin'izao tontolo izao!
Mendrika ny fanajako ianareo ry Leica, mahasahy miteny ny marina… Saingy enga anie andriamanitra hitahy ny fiharianareo ao Shina tanibe…
lahatsary tsara, maninona ny olona ao shina no tsy tia azy no mahalala… Angamba ry zareo tsy mahasahy miatrika ny marina teo [sic] governemanta …